10 Sawir Gacmeed Si Qurux Leh U Sameeya Qalinka | Abuurista khadka tooska ah
Marka qofku bilaabo inuu barto sawirka ama rinjiyeynta, waxa ugu horeeya waxaa la siiyaa qalin ka dibna dhuxusha. Waa inaad barataa inaad bixiso hooska, inaad wax barato oo aad barato sameynta khadad kala duwan oo ka kooban qaabab kala duwan. Taasi waa sababta qalinku u noqdo saaxiib weyn oo aan la macaamili doonno una qaadan doonno si deggan.
Markaas waad heli doontaa 10 fanaaniin heer sare ah isticmaala qalinka iyo farsamooyinka sawir gacmeedyo kala duwan si ay u abuuraan shaqo farshaxan aan caadi ahayn sida aad arki karto. Aynu qabanno ka hor 10-ka xariif ee qalinka, madow iyo caddaan iyo waaqica.
1 Ray Bradbury oo uu qoray Franco Clun
2 Sensazioni waxaa qoray Diego Fazio
3 Keith Moore's Big Ben
4 Macallin by Rovert Eaves
5 Dukumiintiyada Cath Riley
6 David Kao ee Audi R8
7 Bisad by Stefan Marcu
8 Clint Eastwood oo uu qoray Giacomo Burattini
9 Tiger oo uu qoray Paul Lung
10 Hooyo Teresa by Jay Varma
Ray Bradbury oo uu qoray Franco Clun
Sawir qaas ah oo ka mid ah halyeeyga sayniska taas oo aan ka ognahay Ray Bradbury oo ay sameysay Franco Clun.
Sensazioni waxaa qoray Diego Fazio
Sawir gacmeedkan ayaa la sameeyay waxaa qoray Diego Fazio iyo inay ku qaadatay 200 saacadood waa shaqo aan caadi ahayn daaweynta uu ku haysto biyaha darteed. Halkan waxaan ka soo qaadnay bil ka hor isaga iyo laba kale oo farshaxanno waaqici ah.
Keith Moore's Big Ben
Tusaale heer sare ah shaqada dhismaha oo leh sawir-gacmeedka qalin-ku-dheellitirka ah ee 'Keith Moore'.
Macallin by Rovert Eaves
Rovert Eaves ayaa awood u leh qabsado wax aad u nool iyadoo lagu eegayo qaabka tusaalaha. Si fudud sixir.
Dukumiintiyada Cath Riley
Shaqada a shay aan nooleyn taas oo kaliya ah kabaha qaar. Shaqo xusid mudan iftiinka ilaa mugdiga liiskaan waxaa qoray Cath Riley.
David Kao ee Audi R8
David Kao wuxuu bilaabay shaqadiisa leh sawirka leh 3 sano. Hada waa 24 sano jir, wuxuu awood u leeyahay sameynta sawirkaas cajiibka ah ee Audi R8.
Bisad by Stefan Marcu
Dareenka timaha bisadu way dhalaalayaan, laakiin milicsiga indhihiisa Waxay siisaa dhammaan noloshaas iyo cusbooneysiinta ku timid fiirinta kooban ee shaqada Stefan Marcu.
Clint Eastwood oo uu qoray Giacomo Burattini
Sawir gacmeedku ma aha mid aad u macquul ah sidoo kale, laakiin waa in muuqaalkaas la qabtay ee tusaalaha ah, ay suurtagal tahay qabsado qayb ka mid ah nuxurka. Wax ku dhaca midkan Clint Eastwood.
Deviantart by Burattini.
Tiger oo uu qoray Paul Lung
Meel kasta oo aad ka eegto, waa wax aan qiimo lahayn oo aan awoodno ka hor sawir halkii sawir laga qaadi lahaa.
Hooyo Teresa by Jay Varma
Jay Varma wuxuu noo geynayaa Hooyo Teresa iyo taas u muuqdo mid aad u xiiso badan Isaga ayaa iska leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » 10 dhacdo oo farshaxanimo oo xaqiiqda ku jirta qalin
Rinjiyeynta saliida farshaxanka Michalis Makroulakis